Dawlada Qadar oo Sheegtay in ay soo Iibsan doonto Diyaarado Dagaalka: – Radio Muqdisho
Dalka Qadar ayaa sheegtay in ay soo iibsan doonto 24 diyaaradaha dagaalka gar ahan ku waa waxa basaasa qaymo ahan garaya $ 8bn oo ka timid Boqortooyada Ingiriiska. Heshiiska labada waddan waxaa lagu saxiixay magaalada Doha ee dalka Qadar .
Wasiirka Gaashaandhiga Dalka Qadar Khalid bin Mohammed al-Attiyah iyo dhigiisa British, Gavin Williamson ayaa si wadaajir ah u saxiixay heshiiskan lagu kala iibsanayo diyaardah waxa basaasa.
“Duulimaadyadan diyaaradaha ah ayaa kor u qaadi doona howlgallada millatariga ee Qadar si ay wax uga qabtaan caqabadaha aynu la wadagnay Bariga Dhexe.waxan diyaar u nahaya taageeridda xasilloonida gobolka iyo in la gaarsiiyo amniga ,” Williamson ayaa sidaas yiri.
Heshiiska diyaaradaha ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah tababarka shaqaalaha ciidamada, sida lagu sheegay bayaanka.
Labada waddan ayaa sidoo kale isku raacay in ay abuuraan hawlgal wadajir ah, oo ah bilowga wada-xaajoodka ka dhexeeya ciidamada Qadar iyo ciidamada Royal Air Force (RAF).
“Dowlada qadar ayaa tiri waxan yeelan doonaa door muhiim ah oo ku saabsan cirifka hawlgalka iyo ammaanka cimilada inta lagu jiro dhacdooyinka Koobka Adduunka 2022-ka.”
Qatar ayaa sheegtay Khamiistii in ay iibsan doonto 12 diyaaradood oo Dassault Rafale ah oo ka imaanaya shirkadda duulimaadyada Faransiiska ah oo ku iibsatay $ 1bn. Juun 5, Sacuudi Carabiya, Bahrain, Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inay joojin doonaan dhammaan xiriirada diblomaasiyadeed iyo dhaqaale ee ay la leeyihiin waddanka Khaliijka,Dalalka ayaa ku eedeeyay Qatar in ay xiriir la leeyda hay argagixisada,